Ekoatora: Fandaminana Indray ny Tafika Taorian’ny Nahitàna Zavatra Manahirana · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora: Fandaminana Indray ny Tafika Taorian'ny Nahitàna Zavatra Manahirana
Voadika ny 05 Jolay 2018 4:52 GMT
I Ekoatora dia azo ambara ho firenena somary kely ao Amerika Latina, saingy niatrika olana marobe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2008. Niharan'ny fanenjehana manokana ny tafika nandritra io vanimpotoana io, nanomboka tamin'ny fanampiany nanerana ny firenena tamin'ny fotoana nisian'ny tondradrano, ka hatraminin'ny ady sisintany nifanaovany tamin'i Kolombia tsy ela akory izay. Tao anatin'io olana io, nolazaina tamin'ny vahoaka fa tsy niasa tsara intsony ny radara, izay vao mainka nanampy trotraka ny fisavoritahana tamin'ireny tranga ireny sy nanova ny fomba fijerin'ny maro ny tafika.
Ampahany fotsiny io amin'ireo tsy fanjarian-javatra navoitran'ny gazety, ary ankehitriny ny resabe tena vao haingana dia ny mety ho fisian'ny mpitsikilon'ny sampam-pitsikilovan'ny amerikana tafatsofoka ao. Ny filohampirenena, sady filoha fara-tampon'ny tafika – Correa – dia nanamafy fa tafiditry ny olon'ny CIA ny sampam-pitsikilovana ao amin'ny fireneny ary misy fifandraisana tsy ara-drariny eo amin'ireo sampam-pitsikilovana ekoatoriàna sy ny avy any ivelany. Ny ampamoaka sasany dia nampiseho fa nampita torohay ho an'ny CIA ny sampam-pitsikilovana ekoatoriàna taorian'ny fanafihana nataon'ny tafika kolombiana ny tobin'ireo FARC tao anatin'ny tany ekoatoriàna.
Io no nanokatra indray ny tantaran'i Philip Agee, mpiasa fahiny tao amin'ny CIA niasa tany Ekoatora, ary nandao azy avy eo noho ny tsy fifanarahana tamin'ny resaka tetikady sy ny iraka efain'ilay masoivoho. Niteraka fahasorenana faobe tao anivon'ny tafika sy ny polisy izany rehetra izany, noho ireo fanambaràna nataon'ny filoha mpitarika azy ireo ihany. Ho an'ireo Ekoatoriàna izay nanaja hatrany ny tafika, andalam-piatrehana olana lalina ny firenena.
Correa izy tenany mihitsy no niaiky fa mety hisy ny olana noho ireo fanambaràna natao ho an'ny daholobe. Tao amin'ny BPLE [esp], nangonin'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity daholo ireo fanambaràna nataon'ny filoha:
Tsy avelako hitranga izany ary raha tsy maintsy hiongana aho vokatr'io (fiampangàna io), dia hiongana. Misy ireo tranga mahamenatra izay namatsian'ny CIA vola ny sasantsasany tamin'ny sampam-pitsikilovana ekoatoriàna, izay natolotra avy hatrany ho an'ny CIA ny vaovao voahangona..
Somos Latinos [es], sehatra iray fizaràna vaovao tsy iresahana manokana an'i Ekoatora fotsiny, fa i Amerika Atsimo manontolo, dia mitatitra ihany koa ity raharaha ity, izay niteraka ny fanesorana ampahany betsaka tamin'ireo manamboninahitra ambony tao amin'ny tafika sy ny polisy.
Talata, nandefa taratasy ny ankamaroan'ireo ao anatn'ny Etamazoro, fihetsika izay tsy mbola nisy hatrizay, nitakiana fifampiresahana mivantana amin'ny filoha. Io no teten-drano kely nampitobaka ny siny. Avy hatrany dia tonga ny valinkafatra ary, araka ny loharano avy ao amin'ny governemanta, vao fiandohana fotsiny io. Nesorina ny Minisitry ny Fiarovana sy ny efa ho antsasaky ny tao amin'ny Etamazaoro, ary singam-bolo sisa no mitazona ny ambiny amin'ireo mpitarika ny tafika.
Tafa ho an ‘ny gazety nataon'ny Minisitra vaovao misahana ny fiarovana, Xavier Ponce. Sary an'ny Fiadidiana ny Lapam-panjakana ao Ekoatora, nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Tsy maintsy tazonina amin'ny teniny ny minisitra vaovao misahana ny fiarovana, Javier Ponce, izay nanosoka hevitra ny amin'ny tokony hampangarahara kokoa ny tafika ekoatoriàna, saingy ndeha isika hanantena hoe ity fanadihadiana ity tsy hifantoka fotsiny amin'ny mety ho fisian'ny fifandraisan'io fikambanana io amin'ny an'ny firenena hafa. Tsy maintsy anaovana fanadihadiana ny asa fitsikilovana tao amin'ny Antenimiera Mpanorina sy ireo olona hafa. Ary izany rahateo no nampanantenain'i Xavier Ponce tao anaty tafatafa iray navoakan'ny gazety Guayaquil El Universo. Raha namaly ny fanontaniana: “Inona àvy ireo fiovàna avy hatrany ho hita ao anatin'ny tafi-piarovana ?”, nanambara i Xavier Ponce fa :
Voalohany indrindra, fanovàna ny zavamisy hoe hatry ny ela ny tafi-bahoaka, tsy ny an'i Ekoatora ireny ihany, fa ny an'ny tanibe iray manontolo, no niankindoha betsaka tamin'i Etazonia. Ny fanànana ireo fitaovana teknolojika handrafetana politika fandresena lahatra, politika-piarovana ary fiarovana ny fiandrianam-pirenentsika…
Ankehitriny ireo Ekoatoriàna dia miandry ny filohany hanazava amin'ny antsipirihany ny antony nandroahany ireo manamboninahitra napetraka hiaro ny firenena. Avy any Meksiko izy no nanambara ireo fiovàna ireo, toerana izay efa fanaovany toy ny mahazatra ny kabariny ao anaty onjampeo alefa ho an'ny vahoaka, ary nanambara izy fa hitondra fanazavàna amin'ny antsipirihany ao amin'ny fahitalavitra.
Na ilay gazety lehibe La Hora [esp] izay itondran'ireo mpanao gazety mpandalina ny politika, toa an'i Vladimiro Álvarez Grau izay manoratra ho an'ny Diario Hoy fanazavana momba ity tantara ratsy ity, miaraka amin'ny fitandremana fatratra. Lahatsoratra iray hafa mahazo vaovao tsara kokoa momba ity raharaha ity no nosoratan'i Kintto Luccas, izay manoratra tsy tapaka ho anà masoivohombaovao marobe.